करौडौं लगानीमा चितवनमै मोटरसाइकल उत्पादन हुने, भारतीय र इटालियन कम्पनीले करोडौँ लगानी गर्दै - PuraKhabar
करौडौं लगानीमा चितवनमै मोटरसाइकल उत्पादन हुने, भारतीय र इटालियन कम्पनीले करोडौँ लगानी गर्दै
September 28, 2018 Purakhabar News
देशमा स्थिर सरकार बनेर लगानीको वातावरण बन्दै गएपछि चितवनमा उत्पादनमूलक उद्योगमा करोडौं रुपैयाँको नयाँ उद्योगहरु थपिने भएका छन् ।
उद्योग विभाग काठमाडौँले जनाएअनुसार पछिल्लो समयमा चितवनमा इटालियन र भारतीय उद्योगले लगानीमा चासो देखाएका छन् ।
चितवनमा आउने भारतीय र नेपालीको संयुक्त लगानीको विश्वकर्मा इन्जिनियरिङले एक करोड रुपैयाँ लगानीमा २५० टन नट बोल्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चितवनमा ७५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको इटालिएन कम्पनी बेला इलेक्ट्रिक अटोले वार्षिक ४५० वटा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि नै तेस्ला एअर कन्डिसनले चितवनको रामपुरबाट उत्पादन गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।
चितवन मात्र नभएर चितवनको छिमेकी जिल्ला नवलपरासीमा आउने गोयल ईस्पात भदौमा आएका उद्योग मध्ये सबै भन्दा ठूलो उद्योग हो ।
दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा आउने उद्योगले विभिन्न किसिमका गरि वार्षिक एक लाख १० हजार टन पाइप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गोयल स्पातले जीआई र एमएस पाइपसँगै विद्युत पोललगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नवलपरासीमा आउने टेन स्टिल उद्योगले २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गरेको छ । उद्योगले मिल टि स्टील र स्टीलनेश स्टिल पाइप गरी वार्षिक १८ हजार टनभन्दा बढी फलामे पाइप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नवलपरासीमै आउने अर्को स्टिल उद्योगमा सिद्धार्थ पाइप्स प्रालि रहेको छ । २४ करोड रुपैयाँ लगानीमा आउन लागेको उद्योगले विभिन्न किसिमका १२ हजार ९६ टन पाइप उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा देशभर गरेर १९ वटा उत्पादनमूलक ठूला उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको हो ।
साउनमा १२ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। पछिल्लो दुई महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल लगानीको करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको @नारायणी अनलाइनले जनाएको छ।
श्रीमानको के कुरामा रिसाउँछन् श्रीमती ?
सुनसरीमा वलात्कारका घटनामा वृद्धि, ओछ्यानमै बलकृत भए दूई बालिका !
May 16, 2019 Purakhabar News 0
फेसबुकमा आतङ्कवाद र हिंसात्मक सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले कडा नीति सार्वजनिक गरेको छ । फसबुकले आफ्नो नीति विपरीत आतङ्कवाद र...
May 12, 2019 Purakhabar News 0
नेपालमा पहिलो पटक रोबोटले चलायो कार्यक्रम
काठमाडौं । सम्भवत नेपालमा सरकारी संस्थामा (मावन यन्त्र) रोबोर्टले कार्यक्रम संचालन गरेको पहिलो पटक थियो। हाकु...
May 10, 2019 Purakhabar News 0
एजेन्सी । फेसबुकले आफ्नो भिडियो च्याट एप बन्द गर्ने भएको छ । ग्रुप भिडियो च्याटको प्रमुख...